Abakhiqizi betelecom tower - China telecom tower Factory, Suppliers
Umbhoshongo onemilenze emi-3
I-3-enemilenze ye-Angular Tower ingumbhoshongo ozisekelayo owakhelwe ngokukhethekile, owenzelwe futhi wahlelwa ngokuya ngemfuneko yama-TELCO.
Imilenze emi-3 yombhoshongo oyishubhu
Amapulatifomu ama-4-lges tubular platform double
30m 3 imilenze umbhoshongo we-tubular
Ukufakwa kwemibhoshongo engu-30m-3-imilenze
Izigxobo ze-Antenna Uma ukuphakama kophahla lwe-antenna kungeqi kumamitha ayi-6, kunconywa ukusebenzisa isigxobo se-antenna esophahleni. Isigxobo se-antenna ngokuvamile siphezulu ngamamitha ayi-4-9, imvamisa ama-antenna ayi-1-3 angalengiswa, enziwe ngepayipi lensimbi eli-D = 60-89, ngentonga yombani encane enobude obungu-500mm phezulu, kanti isigxobo singaba obekwe odongeni noma ozimele Noma umugqa wokudonsa. Izici zomkhiqizo wezinsimbi zokuxhumana: ijamo lesigxobo esetshenziswa njalo, elihle, elilula futhi elihambisanayo; Ukucaciswa okuhlukahlukene ...
i-monopole ingumbhoshongo ozimele omi ozimele omile onepayipi lensimbi elincane njengesakhiwo esikhulu. Inokubukeka okuhle nesakhiwo esilula. Isigaba somzimba wombhoshongo siyisiyingi noma siyi-polygonal. Ine-footprint encane nokusebenza kwezindleko eziphezulu. Isetshenziswa kabanzi imboni Yezokuxhumana; ukumodela kuhlukaniswe / platform platform single tube tower, bracket type single tube tower, light pole type landscape tower, two Wheel landscape tower, bionic tree tower, njll.